I-WordPress 2.1 ilapha ... Hmmmm | Martech Zone
I-WordPress 2.1 isilapha… Hmmmm
NgoLwesibili, Januwari 23, 2007 NgoLwesibili, Januwari 23, 2007 Douglas Karr
Ijaji liphumile… Ngizolinda abanye ukuthi bangene ku-WordPress 2.1 kepha nakhu okwandulelayo:
Ngenjabulo baqamba kabusha ezinye izinketho zemenyu - i-blogroll inengqondo kakhulu kunezixhumanisi namazwana angcono kunezingxoxo.
Ngiku-OSX futhi ngazama iziphequluli ezi-3, iSafari, iCamino neFirefox 2 futhi azikho ezizongivumela ukuthi ngibhekabheke izithombe engizilayishile. QAPHELA: Iphinde yazama i-Internet Explorer 7 ku-Windows XP futhi yaba nenkinga efanayo.
Ummmm… qiniseka ukuthi ukhubaza ama-plugins akho ngaphambi kokuthuthuka. Hawu… isiza sami besisihle kahle lapho ihora elilodwa noma ngaphezulu njengoba ngenze kabusha.
Bengingenayo i-plugin eyodwa eye yaphuka… kepha ngivuselele kabusha yonke into eyodwa ukuze isayithi libuyele emuva.
Umphathi ubonakala evila kancane… kungaba yimi nje. Ngiyawuthanda umsebenzi we-autosave !!!
Uma ngichofoza ku-Phatha okulayishiwe… nesikrini esingenalutho.
Nicabangani? Ukungakwazi ukubhekabheka nokufaka izithombe kuzongibulala ngempela. (Ngiyakwazi ukuwalayisha ngaphandle kwenkinga). Angivuseleli noma yimaphi amaklayenti ngize ngizwe amanye.
I-OSX: Yenza ngokwezifiso iWindows Terminal Window yakho
IHackfox Hack: Sesha Ibhulogi Lami usebenzisa amaKeymark
Jan 23, 2007 ku-11: 15 AM
Ngibambe ukuvuselelwa isikhashana nje ngize ngizwe okuningi. Sengivele ngifunde izindaba eziningana zokuthuthuka ngama-plugins amaningi angasasebenzi.
Jan 25, 2007 ku-9: 25 AM
Angikwazi ukungena ngemvume ku-Admin manje. Kuzofanele ngenze ukususwa kwe-plugin ukubona ukuthi lokho kuyasiza yini.
Jan 25, 2007 ngo-3: 21 PM
Isibuyekezo nje… kubonakala sengathi bekukhona imisebenzi ethile yangokwezifiso kutimu yami engathathanga kahle kakhulu ekuguqulweni kwedatha.